Dhabar Xanuun (Back Pain)
Author Topic: Dhabar Xanuun (Back Pain) (Read 84193 times)
« on: January 02, 2008, 08:31:41 AM »
Xanuunka dhinaca hoose ee dhabarka, waxaa dareema 4 ilaa shan qofo boqolkiiba. Inta badan waxuu xanuunka ku dhamaadaa dhowr maalmood ilaa iyo dhoor toddobaad, laakin mar marka qaarkood waxuu qaadan karaa waqti dheer waana soo noqonoqdaa.
Waxuu xanuunka dhabarka ku imaan karaa si degdeg ah waxuuna ahaan karaa mid aad u daran ama waxuu u imaan karaa xoogaa-xooga intii waqti ah waxuuna keeni karaa dhibaatooyin waqti dheer (joogto ah).
Dhinaca hoose ee dhabarka, waxuu ka samaysan yahay 5 xaroor ama ricirro ee loo yaqaan sida L1 to L5. Waxuu sidaa culayska oo dhan ee dhinaca kore ee jirka, waxuuna yahay mid ku jiro hawl aan kala go’ lahayn gaar ahaan markii la rogmanaayo, la jeesanayo iyo markii wax la qaadaayo.
Haddii wax yar oo dhaawac ah gaaro wax kasto ka mid ah dhismaha dhabarka inuu keeni karo xanuun aad u badan iyo raaxo la’aan. Xanuunka dhinaca hoose ee dhabarka waa astaanta inuu jiro dhaawac seedaha, murqaha ama saxuunta (carjawada u dhaxayso labada lafood).
Inta badan dhabarka isagaa is-raysiiyo laakin haddii aad u darran yahay uuna yahay joogto waxaa laga maarmaan ah in la doonto talo caafimaad si loo ogaado xanuunka waxa keenay loona helo daawayn ku habboon.
Inta badan dhabar xanuunka hoose waxaa loogu yeeraay sida ‘ mid aan lahayn meel gaar u ah’ sababtoo ah inuu keenay dhaawac ama cudur aan aad u darnayn, laakin way keeneen laabniin, murqaha oo aadkaadaan, dhaawacyo yar-yar ama jirka oo meel qabsaday ama neerfaha oo wax yar gaaray. Waxaa kale uu ku dhici karaa markii uu jiro uur, ama sabab murugo leh, bukasho, kilyo xanuunka ama hurdo xumi.
Waxaa dhabar xanuunka keeni karo waxqabad maalmeedka sida: si xun u fooraarsi, wax qaadis, wax dhaqdhaqaajin, qunfacid, hindhisid, murqaha oo isgalaan, jirka oo isgalo ama wadidda gaariga oo waqti dheer qaadato iyada oo marna la joojin. Shilalka guriga, shaqada, ama markii la wado gaariga ( oo ku jiro dhaawaca qoorta ) waxayna yihiin sababaha guud.
Qaabka ugu caansan ee dhabar xanuunka daran waxaa keeno bararka ama murqacashada mid ama ka badan ee saxuunta ku dhex jirto xaroorka ama ricirrada oo keenayo in ay cadaadis saaraan neerfaha.
Waxaa xaaladaan loo yaqaanaa saxanka taranturooday "disc prolapse" laakin waxaa si aad ah oo sax ah loo tilmaamaa inuu
yahay saxan booskiisa ka durqay ama ka sikaday. wuxuuna keeni karaa xanuun miskaha, cajiraha iyo lugta haddii saxankaa turonturooday uu cadaadis saaro neerfo dhabarka, akhriso qoraal aan uga hadlay xanuunka Sciatica: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,4611.0.html
Sida caadiga ah saxanka wuu gurmaa waxuuna la qayirmaa da’da. Ama waxuu daba socdaa dhaawaca sidaasi darteedna inay guud ahaan keenaan adeeg iyo xanuun, gaar ahaan aroorta hore una keenaan wayeelka lafo xanuun.
Waxaa kaloo dhabar xanuunka hoose keeno tiro kale oo xaalado ah sida cudurada lafaha, burooyinka, infekshanka haweenka khaasatan tubooyinka iyo caabuq kaadi mareenka.
Sidee loo baaraa dhabar xanuunka?
Markii laga shakisanyahay dhibaatooyinka saxuunta waxaa la sameeyaa x-ray, iskaanka tomogarafiyada ee la mariyay computer-ka (Skaanka CT ama Cat), ama iskaanka ee dhawaaqa birqabadka (MRI) ayaa lagu talin karaa si loo helo warar sax ah.
Sidee loo daaweeyaa dhabar xanuunka?
Waxa haatan lagu taliyo in lagu daaweeyo dhabar xanuunka waxuu yahay:
• Isticmaalka xunuun-dilayaasha;
• Sii wadidda waxqabadyada caadiga ah halka ay ka suurto gasho.
• Daawaynta osteopath-ka, chiropractor-ka, jir-jimciyaha, ama cirbad-durid adeegsadaha ee ah xirfadlayaal ayaa kaa caawin karaan, waxay kale ay daraasaadka muujiyeen in jimicsiga fudud uu waxtar leeyahay.
• Sii wad shaqada, ama si degdeg ah uga soo laabo haddii ay suurto gal tahay.
• Waxaa fiican inaad ku nasatid sariirta in aan ka badnayn labo maalin, in ka bdan waxay keeni kartaa waxtar xumo.
• Sameey layliga jimicsiga si loo xoojiyo murqaha iyo si loo simo dhinacyada.
• Isticmaal kuleel (warqad kulul ama qubays kulul) ka dib maalmo markii uu dabco xanuunka murqaha.
Hadduu xanuunku aad u daran yahay waxaa loo baahan karaa qalliin sida microdiscectomy, oo keenaayo in la dayacatiro meesha dhaawaca gaaray ama saxanka murqacday.
Ma laga hortagi karaa dhabar xanuunka?
Si uusan kuu qaban dhabar xanuunka waa inaad dhabarkaada ka ilaaliso waxyaabaha dhaawac u keeni karo, aadna sugtaa inuu dhabarkaada noqdo mid xoog iyo fudeed leh. Waxaa kale lagu dabaqayaa talada dhabar xanuunka joogtada ah, lehna dhacdooyinka soo noqnoqdo:
• Yareey culayska saa’idka ah,
• Sameey jimicsiga si aad u sii hagaajisid dhabarkaada iyo murqaha calooshaada,
• Marka aad fadhiisanaysid, dhabarkaagu ha toosnaado,
• Ku seexo sariir iyo joodari adag,
• Sax qaadista iyo gacan ku qabadka alaabaha, weecashada adkaynta iyo isgalka muruqa ee kediska ah,
• Isku day oo yareey murugada, lab-lakaca iyo kacsanaanta
• Sameey jimicsi joogto ah (socod ama dabaalasho waxay u fiican yahiin dhabar xanuunka).
Haddii aad su'aalo caafimaad ah qabtid iigu soo dir qeybta su'aalaha: http://somalidoc.com/smf/index.php/board,31.0.html
Re: Dhabar Xanuun (Back Pain)
« Reply #1 on: September 05, 2018, 08:47:00 PM »
Asc dr hindisyo xoogan oo is xig xigay kadib waxan daremay seydahay in ay wax iga gaareyn hada mararka qaar ma is dhaqajin jaro xanuun saaid eh waa daremaa waxan isticmalay diglofin iyo naribiyon maalmo markaa isticmaalo waan fiicnaanaa lkn malmo kadib sideydi ayaaan noqonaa hada lugta bidixaa ibaratay xanuuna wey igu heysaa marka xanuunkaa dhabarka meelasocotaa dr isoo jawaab pls
« Reply #2 on: January 06, 2019, 04:02:02 PM »
Asc walal Aniga qabo xanunka dhabarka l4 l5 disc prolaps lugta bidix. Dareen malaha bariida Ka bilow ila lugta. Kabuubyo. Mar kasta Iga heyso dhabarkne. Wuu i dikamaya mudo 5sano. Ah Ayan qabey xanunka. 1 saac. MA socon karo. Fadhigane Wuu I dhiba. MRI Ayaa dhabarka leyga saarey. Physiotherapy Ayan tagey mudo sanad ah Waxba Kuman dheefin. Dhaqtarka wuxu igu yiri. Neerfa rootka aya ciladu gaartey. Hadad kaadida kontroli weydo imaw. Cisbitaalka waalagu qaalaya. Anigane mA rabo qaliin dhabarka Waa halis wanka baqey. Kaadi dhibic aya Iga timado anigo ogeyn marka qeyr alle haku siye. Maxa igula talin laheyd Oo aan sameya si qaliinka Iga baqdo . Cimrigeygu mA weyna 40 aya waxyar ila jiran
Views: 25746 August 10, 2015, 11:08:40 AM
Views: 24037 September 16, 2016, 09:11:55 PM
Views: 17580 April 13, 2017, 11:46:51 AM
Views: 34640 March 09, 2011, 10:28:48 PM
Views: 23192 December 23, 2010, 07:28:23 PM